Warshad Qalabka Gawaarida - Soo-saareyaasha Qalabka Gawaarida Tayada Sare, Alaab-qeybiyeyaasha
Shaxda Isku-uruurinta Rotary
Dhammaan xirmooyinka yar yar ee dhammaaday ee lagu dhejinayo miiska isku-uruurinta, shaqaaluhu way fadhiisan karaan si ay u sameeyaan feer dambe, kartoon kartoon ah.
Gawaarida qaadista ayaa lagu dabaqi karaa gaarsiinta boorsooyinka dhammeystiran ee ka hooseeya mashiinka boorsada toosan si loogu soo saaro saldhigga kale ee shaqada.
Madal Taageero Weigher
Barxadku waa mid iswaafajsan, xasilloon oo nabadgelyo leh tareenka-tareenka & jaranjarada. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xajiyo miisaanka culeyska,
Z-Nooca baaldi wiishka
Waa shaqo in kor loo qaado qalabka dhulka ka jira lana geeyo tas-hiilaadka sare.
Waa wiishka bilaashka ah ee wareega mobilada oo leh qalab lagu rakibo oo muhiim ah. Mashiinka wareegaya ee ku xiraya qalabka wax lagu gooyo ayaa dabciya waxyaabaha ku jira guntinta oo wuxuu ka caawiyaa quudinta qaybta wiishka wiishka xaarka.
Baaraha Birta Baakadaha Aluminium Aluminium
Waxaa ugufiican in lagu ogaado birta birta ah & birta birta ah ee xirmooyinka aluminium aluminium, sida shukulaatada, baradhada baradhada, sausage budada caanaha, alaabada la shiilay iwm.
Baadhayaasha Birta ayaa faa'iido u leh in lagu ogaado walxaha birta ah iyo kuwa aan birta ahayn ee ku jira xirmooyinka alaabada la dhammeeyey, waxaa si ballaaran loogu dabaqay cuntooyinka, alaabada carruurtu ku ciyaarto, dawooyinka, dharka iyo warshadaha kale.
Checkweighers waxay xamili karaan noocyada baakadaha ee kala duwan, oo ay ku jiraan boorsooyin, saxaarad iyo kartoono waxayna ku habboon yihiin jawiga wax soo saarka badankood. Naqshad casriyeysan oo casriyeysan ayaa ka dhigeysa hubiyaha miisaanka si fudud loo nadiifiyo yareynta waqtiga dhimista.